विद्यालय शिक्षाबाटै वञ्चित चेपाङ : भोकभोकै सुत्नुपर्ने बाध्यता - Ratopati
गोरखा, ११ वैशाख – नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएदेखि नै देशभर भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहेका छन् । शिक्षाबाट बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको घेरामा ल्याउन सरकारले भर्ना अभियान गर्दै आएको छ ।
तर गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका घ्याल्चोक–७ छतिवनगैराका चेपाङ बालक विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित छन् । विद्यालय टाढा भएर होइन, के खाने ? के लगाउने ? भन्ने मुख्य समस्याले गाँजेपछि बालबालिका विद्यालय पढ्न जान सकेका छैनन् । चेपाङ बालबालिकाको दिनचर्या खेल्ने, गोठालो जाने र अर्काको काम गर्दैमा बितेको छ ।
भोकभोकै सुत्नुपर्ने बाध्यता
जग्गा पनि छैन, श्रीमती अन्यत्रै
सम्पत्तिको नाउँमा एउटा थोत्रो रेडियो र गाई
डन्डुले भने, “काम गरेको दिन खान पाइन्छ । काम नपाएको दिन भोकभोकै सुत्छौँ ।” कान्छा छोरा विशाल डन्डुको साथी हो । जेठो छोरा कुमार छिमेकीको घरमा डेक (टिभी) हेर्न पाइने भएकाले उत्तै रमाउँछ । खानेपानी लिन १५ मिनेट टाढाको खोलामा धाउनुपर्छ । करेसाबारी बाँझै छ । डन्डुको घरमा सम्पत्तिको नाउँमा एउटा थोत्रो रेडियो र गाई छ । “मेला गएर ल्याएको दुई, तीन सय रुपैयाँले चामल किन्ने कि, भुटुनमसला किन्ने कि, नुन किन्ने कि के–के किन्ने ?” डण्डुले गुनासो गर्दै भने, “बिरामी परेको दिन आफू त भोकै पर्छु पर्छु, छोराहरु समेत भोकभोकै हुन्छ ।” स्थानीय शिक्षक अनुप चेपाङले भर्ना हुने तर नियमित विद्यालय नजाँदा चेपाङ बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुँदै आएको बताए।
करिब ६०० घरपरिवार
गोरखाको घ्याल्चोक, भुम्लिचोक, ताङ्लीचोक, मकैसिङ, ताक्लुङलगायत गाउँमा करिब ६०० घरपरिवार चेपाङको बस्ती छ । जनता आवास कार्यक्रममार्फत बर्सेनि सरकारले चेपाङ परिवारलाई घर बनाउँदै आएको छ । झुप्रोमा बस्दै आएका चेपाङ घरमा बस्न पाएका छन् तर, उनीहरुको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने खालका सहयोगी कार्यक्रम सरकारी तवरबाटै हुन सकेको छैन ।